Muxuu Yahay Waqtiga Soo Kabashada Kadib Qalitaanka Robotikada?
Bukaannada u baahan qalliinka xubinta taranka dumarka ee xaalad caafimaad darro, waxaan u isticmaalnaa nidaamka 'Vinci®' ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka. Waa ugxanta ugu yar ee faleebada ee loo heli karo dumarka da 'kasta leh. Qalliinka xubinta taranka dumarka ayaa soo saaraya makaanka. Intii lagu guda jiray a robot-caawinta laparoscopic hysterectomy, waxaan u adeegsanaa kumbuyuutar si aan u xakameyno qalabka qalliinka inta lagu jiro qalliinka Columbus, Dublin, ama Westerville, OH. Tani waxay u oggolaanaysaa dhakhaatiirteena qalliinka inay si fudud ku galaan meelo yar yar oo ay aragti fiican ka haystaan ​​qalliinka marka loo eego qalliinka laparoscopic.
Maxay tahay sababta qalliinka xubinta taranka ee robotku u baahan yahay?
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, dhaqaatiirtayadu waxay kugula talin karaan qalliinka astaamaha ee robot-ka markaad dhibaato ku hayso ilmo-galeenkaaga oo aan si fiican uga jawaabin daaweynta kale.
Sababaha qaarkood waxaan kugula talin karnaa robotic hysterectomy bukaankeenna waxaa ka mid ah:
Burooyinka kansarka ama aan kansarka lahayn
Xanuun miskaha oo daba dheeraada
Dhiigbax aan caadi ahayn oo muddo dheer ah
Fibroids aan qanjirka lahayn
Soo bixida ilma-galeenka
Qalliinkan rootic-ka ah ee ugu yar ee faafa ayaa ka caawiya xallinta dhibaatooyinka caafimaad ee galmada ee dumarka.
Faa'iidooyinka qalliinka xubinta taranka ee robotka
Faa'iidooyin badan ayaa ku jira inaad yeelato robotic hysterectomy oo loo maro hab dhaqameed dhaqameed, oo ay ka mid yihiin:
Dhiig yaraanta iyo baahida loo qabo in dhiig lagu shubo
Soo kabsasho deg deg ah
Joogitaanka cisbitaalka oo gaagaaban
Meelo yaryar oo la jeexay, oo macnaheedu yahay nabar yar
Markaad rabto inaad waxbadan kabarato astaamaha qalafsan ee robotic, ballan ka qabso xafiisyadeena Columbus, Dublin, ama Westerville, OH.
Mudo intee le'eg ayuu qalliinka xubinta taranka ee robotku qaataa?
Qalliinkaaga qalliinka xubinta taranka ee robotka waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo la isticmaalayo suuxdinta guud. Tuubo ayaa la gelinayaa cunaha si ay u suuxiso oo kaa caawiso inaad neefsato inta aad huruddo. Waxa kale oo lagaa yaabaa in lagaa geliyo tuubo dhuuban oo lagu rido kaadi-haystaada si ay kaadi uga soo daadiso inta hawshu socoto iyo qalliinka ka dib. Qalitaanka xubinta taranka ee robotku wuxuu qaataa 3 - 4 saacadood.
Si aan u bilawno qalliinkaaga, waxaan ka sameynaynaa meelaha lagaa qalay oo lagaa qalay oo u dhow barta calooshaada. Marka xigta, waxaan caloosha ku shubeynaa gaas si aan u buufinno, sidaa darteed waxaan heysannaa qol badan oo aan ku aragno gudahaaga oo aan ugu shaqeyno si hufan. Laparoscope ayaa la gelinayaa calooshaada iyada oo ay la socdaan qalab kale oo qalliin. Dhakhtarka qalliinka ayaa markaa u dhaqaaqaya aagga xakamaynta si uu meel fog uga xakameeyo qalliinkaaga. Ilmo-galeenka ayaa loo jarjarayaa qaybo yaryar, si markaa si fudud looga saari karo jeexitaanadan.
Waxay kuxirantahay sababta qalliinkaaga, ilmo-galeenkaaga oo dhan waa lagaa saari karaa ama kaliya qeybta kore ee makaanka afkiisa. Tuubooyinka ugxansidahaaga iyo ugxansidahaaga ayaa sidoo kale lagaa saari karaa inta lagu jiro qalliinkaaga. Si loo dhammeeyo qalliinkaaga, dhammaan jeexitaannada waa la xiray waxaana lagu daboolay faashado yaryar.
Maxaa la filan karaa ka dib qalitaanka qanjirka 'robotic'
Qalliinka ka dib, waxaa lagu geyn doonaa qolka soo kabashada si loola socdo marka aad ka bogsato suuxdintaada. Waxay u badan tahay inaad cisbitaalka sii joogi doonto dhawr maalmood. Markaad guriga aadi karto, waxaan ku siin doonaa tilmaamo aad si dhow ula socoto iyo liiska ballamahaaga dabagalka ah. Waxaan kugula talineynaa in meelaha lagaa qalay ay ahaadaan kuwo qalalan 2 - 3 maalmood. Kateetarka kaadiheystaada ayaa lagaa saari doonaa maalin ama laba maalmood. Waxaa laga yaabaa inaad yeelato xoogaa dhiig ah siilka. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad kacdo oo aad socotid sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid, maxaa yeelay taasi waxay kaa caawinaysaa ka-hortagga xinjirowga dhiigga ee samaysma lugahaaga. Waxaan kuu qori doonaa dhiig khafiifiyeyaal si aad uga hortagto sidoo kale.
Waqtiga soo kabashada oo dhammeystiran oo lagaa sifeeyo mishiinka 'robotic hysterectomy' wuxuu qaadan karaa meel kasta dhowr toddobaad illaa dhowr bilood. Soo-kabashada ka dib qalalaasaha robot-ka ee hysterectomy waa ka gaaban yahay kana xanuun yar yahay sida caadiga ah ka dib qalitaanka xubinta taranka ee caloosha. xiriirka xafiiskeenna haddii aad la kulantid xanuun aan ka nasanayn daawada, dheecaanka, casaanka ama bararka goobaha lagaa qalay, qandho, dhiig bax siilka ah oo culus, lugaha oo barara, ama laab xanuun.
Baro wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka qanjirka 'robot hysterectomy'
Markaad u baahan tahay qalliinka xubinta taranka, dhakhaatiirtayada Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka waxay ka wada hadli karaan noocyada qalliinnada aan u fidinno bukaannadeenna da 'walba. Inta lagu guda jiro booqashadaada, waxaan sidoo kale kugula socodsiin karnaa faa iidooyinka ay leedahay in lagaarsado aalada loo yaqaan 'robotic hysterectomy' iyo 'hysterectomy dhaqameed'. Si aad u ballansatid ballan si aad wax uga ogaatid sida uu robot-ka u shaqeynayo, u wac xafiisyadeena Columbus, Dublin, ama Westerville, OH maanta.
Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville Qalitaanka Qalitaanka Robotka